एनएमबी बैंकका प्रमुख लगानी अधिकृत श्रीजेस घिमिरेसँग हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो वार्ता
काठमाडाैं । यही चैत १९ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डमा तेस्राे संकरणको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’ सुरु भई आज (सोमबार) बाट सकिँदैछ । देशका जलविद्युत निर्माता, सामान उत्पादक, सप्लायर्स, डिजाइनर्स, कन्सल्ट्यान्ट, लगानीकर्ता र बैंक/वित्त कम्पनीलगायतलाई एउटै छानामुनी भेला गराएर यसकाे विकास गर्ने उद्देश्यले एक्स्पोको आयोजना गरिएको हो । एक्स्पोबाट आन्तरिक विद्युत खपतमा वृद्धि गर्ने र निर्यातका लागि बजारीकरणको ठूलो ज्ञान हासिल हुने अपेक्षा गरिएकाे छ ।
एक दर्जन बढी देशका विभिन्न व्यवसायमा संलग्न प्रतिनिधिको एक सय बढी स्टल रहेकाे एक्स्पोमा विद्युत उत्पादनसँग प्रसारण तथा बजार विस्तारमा सहायक सिद्ध हुने विश्वास पनि लिइएकाे छ । सिधै पहुँच हुने, समय र पुँजीको बचत हुने, विकास भएका नयाँ डिजाइनका उपकरणको बारेमा बुझ्नका लागि एक्स्पोमा एनएमबी बैंक मुख्य प्रायोजकका रूपमा रहेको छ । यसै विषयमा बैंकका प्रमुख लगानी अधिकृत श्रीजेस घिमिरेसँग गरिएको छोटो कुराकानी :
हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको मुख्य प्रायोजकमा एनएमबी बैंक छ, यही बैंक नै मुख्य प्रयोजकको रूपमा किन ?
याे एक्स्पो जलविद्युतसँग जोडिएको छ । हामीले पछिल्लो समय ऊर्जा मध्ये जलविद्युतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका छौ । सोलार, वायु, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम सबै ऊर्जा हुन, क्लिन इनर्जी भनेको जलविद्युत हो ।
जलविद्युतसँग सम्बन्धित भएकाले पनि हामीले समृद्ध नेपालको सपना, जलसम्पदामा सम्पन्न र नेपालीलाई नेपालीकै बिजुलीसँग जोड्नका लागि एक्स्पोमा मुख्य प्रायोजकको रूपमा छौ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) सँग सहकार्य गरेर एक्स्पोमा सहभागिता जनाइएको हो । एक्स्पोमा बैंकको नारा नै ‘अपार सम्भावना’ हो । अपार सम्भावनाकाे रूपमा रहेकाे जलसम्पदालाई सरल रूपमा सहि सदुपयोग गर्न पनि एक्स्पोमा सहभागिता जनाइएको हो ।
हाइड्रो एक्स्पोबाट बैंकलाई के कस्ता फाइदा हुन्छन् ?
यो एक्स्पोमा हाम्रो सहभागिता फाइदाका लागि होइन् । बैंकलाई सबैले चिनुन् भनेर गरेको पनि होइन । गर्नुपर्ने कार्यमा हामीले साथमात्र दिएको हो । ‘पिपुल एन्ड प्लानेट बिफोर प्रोफिट’ को अवधारणाबाट हामी अघि बढेका छौ । हामी दिगो वैकिङ्गमार्फत काम गरिरहेका छौं । नाफा भन्दा अघि सोचेर गरियो भने मात्र दिगो हुन्छ भन्ने अवधारणबाट अघि बढेका छौं । एक्स्पोमा सहभागी हुनुको मुख्य कारण राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पुरा गर्नु पनि हो ।
एक्स्पो अवधिभर भएको हाइड्रो पावर सम्बन्धी विषयत टेक्निकल सेसन र निर्माता, सामान उत्पादक, सप्लायर्स, डिजाइनर्स, कन्सल्ट्यान्ट, लगानीकर्ता र बैंक/वित्त कम्पनीलगायत स्टलबाट विद्युत खपत र बजारीकरणमा ठूलो ज्ञान हासिल गर्न, जलसम्पदामा सम्पन्न, समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न बैंक इपानसँगको सहकार्यमा एक्स्पोमा सहभागिता जनाएको हो ।
यो भन्दा पहिले पनि २ पटक हाइड्रो एक्स्पो भइसकेका छन्, पहिलेको २ संस्करणले नेपालको ऊर्जा विकासमा के कस्ता फाइदा भएको ठान्नुहुन्छ ?
धेरै फाइदा भएको छ । पहिलो संस्करणको हाइड्रो एक्स्पोकाे समयमा एउटा टबाईनको मूल्य प्रतिकिलाेवाट ४ सय देखि ५ सय डलरसम्म पर्न आउथ्यो, अहिले घटेर १८० डलरलेखि २२० डलरसम्म आइपुगेको छ । पहिलो सानोसानो काम अलिअलि मात्र गर्दा कसले के सप्लाई गर्छ, कसले के उत्पादन गर्छ, कसले के डिजाइन गर्छ भन्ने कुरा थाहा नै थिएन । को राम्रो थियो को नराम्रो । तर, एक्स्पोले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता आए, उत्पादनकर्ता आए, भेटघाट भयो, जसले गर्दा एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा भयो उपकरणहरू गुणस्तरीय हुन थाले । सबैलाई एउटै छानामुनी जम्मा गर्दा गुणस्तरीय उपकरण र ऊर्जा विकासमा ठूलो फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएकाे छ ।
अहिलेको एक्स्पोले के कस्ता फाइदा पुग्ला ?
हाइड्रो एक्स्पोबाट लगानीकर्ता, उत्पादनकर्ता, सप्लायर्स, डिजाइनर्स सबैसँग सिधै पहुँच हुन्छ । सयम र पुँजीको बचत हुन्छ । नयाँ प्रविधिको बारेमा थाहा हुन्छ । यो एक्स्पोबाट अझ हाइड्रो पावर क्षेत्रमा लगानी बढ्छ । आन्तरिक विद्युत खपतमा वृद्धि गर्ने र निर्यातका लागि बजारीकरणको ठूलो ज्ञान हासिल गर्नेछ । ऊर्जा विकासमा के कस्ता चुनौती रहेका छन्, विकासका लागि नेपालको तयारी कस्तो रहेको छ भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ । प्रवर्द्धकलाई आयोजनाका लागि कुन ठिक कुन बेठिक भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
एक्स्पोमा प्रर्दशनीमा राखिएको मध्ये भारतीयलगायत विदेशका प्रर्दशनीमा सहभागिता बढी देखियो, यसलाई तपाइले कसरी हेर्नु भएको छ ?
यो एक्स्पोको मुख्य उदेश्य भनेको नै त्यही हो । हामी नेपाली कम्पनीसँग चाहेको बेला जुन समयमा पनि भेट्न, वा कुराकानी गर्न सक्छौ । तर ,भारतीयलगायत विदेशी कम्पनीसँग भेटघाट गर्न गाह्रो हुने, समय लाग्ने हुन्छ । भारतीय कम्पनीमा बढी सहभागी हुनुको कारण भनेको पहुँचका आधारमा अन्यदेशमा भन्दा भारतमा सजिलो हुने भएको पनि त्यही बढी झुम्मिएको हो भन्न सकिन्छ ।
कतिपय विदेशी कम्पनीले भारतमा आएर कम्पनी दर्ता गरेर उपकरण उत्पादन गरिरहेका छन् । इलेक्ट्रो मेकानिकल कम्पोनेन्टमा विदेशी मुद्रा युरो, डलरमा एलसी खोल्नुपर्थ्यो तर भारतमा विदेशी कम्पनी आइसकेपछि कतिपय कम्पनीले भारुमै एलसी खोल्न थाले । प्रवर्द्धकलाई भारुमा एलसी खोल्दा सजिलो हुने भएकाले पनि भारतीय कम्पनीमा झुम्मिएको हो र यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एकदम सहयोग पुग्नेछ ।
अबकाे ऊर्जा विकासका लागि बैंककाे रणनिती कस्तो छ ?
ऊर्जा आफैमा प्राथमिकतामा छ । सन् २०२५ देखि २०३० को रणनीति अुनसार २०२५ सम्म १० हजार ५ सय टन कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने भन्ने छ र सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । बैंकले यसका लागि सहयोग गर्नेछ । विद्युत उत्पादन गर्नका लागि प्रवर्द्धकलाई बैंकले आर्थिक पक्षमा सहयोग गर्नेछ । एनएमबी पनि हाइड्रो पावर क्षेत्रमा किन भन्दा जलविद्युत विकासले अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्छ भन्ने हिसाबले हाइड्रोमा प्रतिबद्धता छ । यो प्रतिबद्वता पूरा गर्नका लागि हामीले गर्न सक्ने हिसाबले कार्य अघि बढाएका छौ । त्यसैका लागि बैंकले यस्तो खालको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै आएको छ, आगामी दिनमा पनि सहकार्य गर्दै अघि बढ्नेछ ।
ऊर्जा विकासका लागि अबका चुनौतीहरू के कस्ता देिखिन्छन् ?
अहिलेको हिसाबमा हो भने, वित्तीय व्यवस्थापन हो, बजारीकरण र विद्युत खपत । सरकारले आगामी २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छ । १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि करिब २ हजार ६ सय खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा दुर्गममा क्षेत्रमा रहेको करिब ३ लाख घरधुरीमा मात्र विद्युतको पहुँच पुग्न बाँकी छ । यी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । नेपालमा यत्तिको पुँजी छैन्, यसको व्यवस्था कसरी गर्ने त ? यसको बारेमा सोच्नुपर्छ । अर्को भनेको विद्युत खपत । २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन नभई १० हजार मात्र उत्पादन भयो भने पनि नेपालको उत्पादन क्षमता १२ हजार मेगावाट हुनेछ । यो कहा खपत गर्ने ? अहिलेको नेपालको उच्च माग भनेको करिब १५/१६ सय मेगावाट छ । अब, बिजुली उत्पादन सँगसगै वातावरणलाई नबिगारी ‘बिजुली उत्पादबाट हुने लाभ वातावरणलाई हुने क्षति भन्दा धेरै नै बढी हुन्छ’ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्छ ।
बैंकले अहिलेसम्म कति जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेको छ ?
बैंकले हालसम्म ५९९ मेगावाटका ४५ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेको छ । बैंकले २९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमा २७ वटामा लिड बैंक रहेको छ । लगानी भएका मध्ये २३ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । बाँकी २२ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् ।